Barca Oo Qiratay Inay Ka Cabsi Qabto In Messi Looga Afduubto Lacagta Heshiiskiisa Lagu Burburin Karo %
Agaasimaha Ishkaashiga ee Barcelona, ninka lagu magacaabo Pancho Schroder, ayaa wuxuu qiray in aysan xaqiijin karin hadii Lionel Messi, lacagta lagu burburin karo heshiiskiisa ay uga filan tahay in laacibkaan uu mustaqbalkiisa kusii nagaado Camp Nou.
Warar leysla dhex-marayo ayaa waxay sheegayaan in kooxda reer Catalan wiilkeeda, kaasoo heshiiskiisa lagu buburin karo aduun dhan 700 Milyan oo Yuuroo uu uga dhaqaaqi karo, maadaama uu helayo dalabyo kala duwan.
Isagoo ka hadlayey kulan Dhaqaalaha Isboortiga looga hadlayay, kaasoo ka dhacay Magaalada London, ee Ingiriiska ayuu sheegay Schroder, in kadib qiimihii waalida ahaa ee lagu iibsaday Neymar, sanad ciyaareedkii hore ay suuqa wax walba ka dhici karaan.
“Waxaan u sameynay qiimaha lagu burburin karo mushaarka Messi, si uu kubada cagta uga fariisto isagoo Barcelona jooga,” ayuu ku bilaabay hadalkiisa.
“Laakiin, waxa aan dhihi karno ayaa ah in wixii dhacay sanadkii hore, markii Messi uu ku baxay lacagta heshiiskiisa lagu burburin karay ay wali tahay [mida Messi] wax aan ku fileen inuu kooxda lasii joogo,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Inaad eekto waxa dhici doonta mustaqbalka waa mid adag, laakiin kubada cagta ma ahan hadda mid ka fogaan karta inay dhacaan waxyaabo waali ah,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Agaasimaha Ishkaasiga ee Barcelona.
Liverpool vs Man Utd: Kooxda Weyn, Macalinka Fiican & 2 Kamid Ah Khabiirada Sky Sport Oo Saadaaliyay Kulankan